बस दुई मोबाइल उपकरणहरू ZenPad10 ZD300CL र TransformerPad TF300TL "ADR" यो सिंहावलोकन सामाग्री छलफल गरिनेछ। यो कार्यात्मक र फलदायी छ ट्याब्लेट ASUS। 10 इन्च - विकर्ण प्रदर्शन यी मोबाइल उपकरणहरू, जो, आवश्यक भएमा, अनुमति दिन्छ तिनीहरूलाई पूर्ण-fledged मा चालू गर्न एक स्पर्श स्क्रीन संग ल्यापटप किबोर्ड जडान गरेर।
यो उपकरण के छ?
यी उपकरणहरू ASUS प्लेट रूपमा अवस्थित छन्। 10 इन्च, सुरुमा उल्लेख गरिएझैं, यी उन्नत मोबाइल कम्प्युटिङको स्क्रिन आकार। यो ट्याब्लेट लागि कुञ्जीपाटी जडान गर्न सम्भव पनि छ। फलस्वरूप, हामी एक वर्ग2उपकरण 1, यसलाई भनिन्छ रूपमा, एक ट्रांसफर्मर प्राप्त वा। एक मा ट्याब्लेट र ल्यापटप अनुहार। यी उपकरणहरू मा सिस्टम सफ्टवेयर "एन्ड्रोइड" अधिवक्ताओं कि मनमा गर्न मात्र कुरा। तसर्थ, सञ्चालन "windose" सिस्टम लागि डिजाइन सफ्टवेयर, यो मामला मा, काम छैन।
मोडेल ZenPad10 ZD300CL र यसको विशेषताहरु
जो यो थियो, र भर्खरै यो मोबाइल उपकरण मा बढी उन्नत सुविधाहरू। सबै को पहिलो, यो सीपीयू एटम Z3560 "इंटेल" बाट। उहाँले4कम्प्युटर मोड्युल, जो 1.83 गर्न GHz को व्यस्त समयमा dispersed सकिन्छ छ। अर्धचालक चिप निर्माण को प्राविधिक प्रक्रिया 22 एनएम पारस्परिक रहेको छ। यो चिप को यो सुविधा उपकरणको एक उच्च समग्र ऊर्जा दक्षता प्रदान गर्दछ छ।
यस मामला मा एक ग्राफिक त्वरक रूपमा विशेष समस्या बिना पनि सबैभन्दा मांग कार्यहरू ह्यान्डल गर्न जो PowerVR G6430 छ। 32 जीबी - राम को राशि2जीबी र निर्माण को भण्डारण क्षमता छ। बाह्य फ्लैश कार्ड स्थापना गरेर यसको क्षमता वृद्धि को संभावना पनि छ, अधिकतम क्षमता जो 64 जीबी हुन सक्छ। टच स्क्रीनको आधार एक म्याट्रिक्स आईपीएस-HD संकल्प छ। यो उपकरण स्क्रिनमा एकदम राम्रो गुणस्तर तस्बिरहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
2 मेगापिक्सेलको -5मेगापिक्सेल मा गोली पीसी मुख्य क्यामेरा सेन्सर, र अगाडि मा। impeccable गुणस्तर फोटो र भिडियो तिनीहरूलाई आशा आवश्यक छैन, तर अझै पनि रोशनी को एक सामान्य स्तर मा उनि स्वीकार्य गुणस्तर तस्बिरहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। एक ब्याट्री? निर्माता अनुसार? यो औसत लोड स्तरमा लगातार सञ्चालनको9घण्टा पर्याप्त हुनुपर्छ। पहिले उल्लेख रूपमा, यो ओएस "एन्ड्रोइड" रूपमा सेवा गर्दैछन्। आफ्नो संस्करण - 5.0।
बोर्ड TransformerPad TF300TL
ASUS यो समीक्षा को दोस्रो नायक बढी भद्र प्राविधिक विनिर्देशों। गोली (10 इन्च) किबोर्ड र फलदायी भर्ने संग - यो सबै उसलाई बारेमा। यो पनि NVIDIA देखि 4-कोर प्रोसेसर Tegra3समाधान प्रयोग गर्दछ। कि बाहेक अधिकतम घडी गति मात्र 1.2 GHz सीमित छ। यस मामला मा ग्राफिक त्वरक - सबै एउटै NVIDIA गरेको विकासकर्ता देखि एक GeForce ULP छ। यस उपकरणमा राम क्षमता 1 जीबी छ, र एकीकृत भण्डारण क्षमता 16 जीबी छ।
अघिल्लो मामला मा, यो बाह्य भण्डारण स्थापना गर्न सम्भव छ, जो को समाई अप 32 जीबी हुन सक्छ। "आईआरएस" - प्रदर्शन म्याट्रिक्स अघिल्लो उपकरण जस्तै हो। र एक समान संकल्प - HD। 1.2 MN - मुख्य क्यामेरा सेन्सर 8.0 MN, र अगाडि मा। दावी ब्याट्री जीवन 14 घण्टा छ।
हामी ट्याब्लेटको को विशेषताहरु तुलना
यो एक ASUS प्लेट बीच धेरै समान छ: 10 इन्च विकर्ण प्रदर्शन तिनीहरूलाई, तिनीहरूलाई प्रत्येक को आधार 4-कोर सीपीयू म्याट्रिक्स स्क्रीन लगभग समान छ छ। तर यहाँ सबै नै प्राविधिक विनिर्देशों छ र सफ्टवेयर प्राथमिकताको ZenPad10 ZD300CL हेर्न छ। राम को यो ठूलो रकम र एक एकीकृत भण्डारण यन्त्र, र थप उत्पादक निर्णय प्रोसेसर (यो CPU मा फ्रिक्वेन्सी धेरै उच्च छ - 1.2 GHz देखि 1.83 गीगा), र सिस्टम सफ्टवेयर को अझ हालैको संस्करण। राम्रो ब्याट्री जीवन (14 घण्टा पद 9) र सुधार सेन्सर मुख्य कोठामा (8 एम5एम): यहाँ TransformerPad TF300TL एकदम कम pluses।
मोडेलहरू प्रत्येक को लागत
यस्तै विनिर्देशों 10 इन्च ASUS ट्याब्लेटको सस्तो हुन सक्दैन। बढी किफायती मोडेल TransformerPad TF300TL छ। क्षणमा, यो अझै पनि 15,000 rubles को लागि खरिद गर्न सकिन्छ। यो उत्पादन बाहिर लिएको एक अपेक्षाकृत लामो समय छ, यसलाई अब मात्र यसको स्टक, धेरै सीमित छन् जो बेचिएको छ।
तपाईं यस्तो बहुमुखी मोबाइल कम्प्युटर प्राप्त गर्न योजना छ भने, तपाईं हतार गर्न आवश्यक छ। आज 22000 rubles देखि - एकदम अधिक महंगा ZenPad10 ZD300CL छ। यो लामो पर्याप्त अझै पनि बेच्न हुनेछ जो यन्त्र-ट्रांसफर्मर, को नयाँ मोडेल छ।
उत्कृष्ट ASUS ट्याब्लेटको - यसको प्रयोगकर्ता, यी मोडेल को दुवै, ट्रान्सफर्मर कम्प्युटर अनुसार। 10 इन्च, समीक्षा यो थप सबैभन्दा अधिकतम आकार जो ट्याब्लेट वा ल्यापटप रूपमा यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ उपकरणहरू यो वर्ग, को लागि छ पुष्टि गर्छ। तर प्राविधिक मापदण्डहरु र सिस्टम सफ्टवेयर को standpoint बढी बेहतर ZenPad10 ZD300CL देखिन्छ। उहाँले थप स्मृति, एक अधिक शक्तिशाली CPU छ। तर एकै समयमा र थप खर्च। तर कुनै पनि मामला मा, यो मोडेल गोली पीसी गर्दा नयाँ जस्तै उपकरण छनौट खोज्न सिफारिस गरिएको छ छ।
खरीद सन्दर्भमा सिफारिसहरू
यो एक ASUS प्लेट बीच धेरै समान छ। 10 इन्च, 4G नेटवर्क, जीपीएस, ग्लोनास, "ब्लुटुथ", "वाइफाइ" - यो हो जो साधारण यी उपकरणहरू लागि प्राविधिक विनिर्देशों पूर्ण सूची छैन। तर यहाँ प्रोसेसर को भाग हो र स्मृति सहायक ZenPad10 ZD300CL मा धेरै राम्रो छ। साथै, यो अझ हालैको उपकरण छ कि पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। उच्च मूल्य - वास्तवमा, उहाँले यो समीक्षा को दोस्रो हाते उपकरण, केवल एक भन्दा कम थियो। तर यो सुधार मापदण्डहरु र यसैले अधिक ZenPad10 ZD300CL यो किन्न बेहतर द्वारा अफसेट गरिएको छ।
ZenPad10 ZD300CL र TransformerPad TF300TL: दुई मोडेल को (समीक्षा लागि मोडेल को चयन लागि मुख्य मापदण्ड - - विकर्ण टच स्क्रीन,4कोर, उचित मूल्य 10 इन्च) विवरण ASUS ट्याब्लेटको छलफल यो सानो लेखमा। यी दावा को पहिलो प्राविधिक विनिर्देशों र fresher सिस्टम सफ्टवेयर सुधार भएको छ। र दोस्रो devaysa अब ब्याट्री जीवन, कम लागत र मुख्य क्यामेरा सुधार भएको छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक आज हरेक अनुप्रयोगको लागि सिद्ध छ।
बस लाग्छ, केही आईप्याड मिनी! समीक्षा: बस जादू!
7 तरिका आफ्नो ट्याब्लेट मा ब्याट्री शक्ति संरक्षण गर्न
हरितगृह प्रभाव - नतिजा डराएका हुन कि?
Hayden Panettiere (Hayden Panettiere): अभिनेत्री बारेमा सबै। उचाइ, वजन, Filmography र व्यक्तिगत जीवन Hayden Panetteri
"Oriflame" बाट "क्यारियर एक्सप्रेस": मान्छे को प्रशंसापत्र र परियोजना को सार
Xerostomia - यो के हो? कारण, लक्षण र उपचार
ओल्गा Gromyko: स्लाव भाषाहरु विनोदी कल्पना विशेषताहरु
उत्पादन को विश्लेषण "Tchelkache" M.Gorky
माथि तपाईं घर मा हल्ला बनाउन सक्छ कति गर्न: भोल्युम समायोजन?